မှတ်ချက် - အကယ်၍ သင်က reboot လုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင်ကန ဦး လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်စဉ်များတွင်ထူးခြားမှုမရှိသေးသောအချိန်မတိုင်မီသုတ်ရည်လွှတ်ရည်ကိုတွေ့ပြီဆိုလျှင်စိတ်မပူပါနဲ့။ ဖြတ်သွားလိမ့်မယ် မြင် တစ်နှစ် - လိင်သည်ကျွန်ုပ်၏ယခင်ဆက်ဆံရေးများထက်ယခု ပို၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည် ပုံမှန်တိုးတက်မှုသည်။ ဒီဗီဒီယိုကိုလည်းကြည့်ပါငါမဟုတ်တော့နောက်ဆုံးမှလိင်မတိုင်မီ masturbate သငျ့သလောအဖြစ် တဦးတည်းကောင်လေး said:
ညစ်ညမ်းမှု၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ၎င်းသည် sensitivity ကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်၊ သို့သော်သင်ကအစပိုင်းတွင်သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်သည်အလွန်အထိခိုက်မခံသောအခါ၊ လိင်မှုကိစ္စအနည်းငယ်နှိုးဆွခြင်းကသင့်ကိုအလွန်နှိုးဆွပြီးလွယ်လွယ်ကူကူသုတ်သင်နိုင်သည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ လိင်ဆက်ဆံတာနဲ့အမျှ sensitivity ဟာပုံမှန်အဆင့်အထိကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ”
ED သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရှားပါးသော်လည်း၊ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများတွင်အချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်မှုသည်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးကိုယ်စားပြုသည် ဒီဗီဒီယို။ အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်တဲ့အကြောင်းရင်းအဖြစ်, porn အသုံးပြုမှုကိုတန်ပြန်အလိုလိုသိပုံရသည်။ နှစျခုဖွစျနိုငျသရှင်းလင်းချက်စိတ်ထဲလာ:
သင်၏ ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်အားအလွန်လျှင်မြန်စွာသုက်လွှတ်ရန်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း (သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစိုက်ထူစဉ်)
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်သို့မဟုတ်ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများစွာကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အချက်အလက်အများစုသည်ယခုကျွန်ုပ်၏မသိစိတ်တစ်ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာအလှည့်အပြောင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြနေသည်။ ဒါမှမဟုတ်, ငါ့အာရုံကြောစနစ်။ ငါ၌ခန်ဓာကိုယ်ခန်ဓာကိုယ်မြန်မြန်လာရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်။ သို့မှသာသင်ဘာကိုသိသလဲဆိုတော့ငါဖမ်းမိတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ယခုငါလေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါးများသည်အမျိုးမျိုးသောတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှူခြင်းနည်းစနစ်များကိုလည်းအကြံပြုရန်လိုအပ်ပြီး၊ လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းကိုနောက်ဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်တိုက်တွန်းသည်။
ငါမခွဲခင် ၂ နှစ်လောက်ငါအရင်ရည်းစားဟောင်းနဲ့သွားနေတယ်။ ဤကာလအတောအတွင်းကျွန်ုပ်၌လိင်မှုဆိုင်ရာပြproblemနာမရှိပါ (ED သို့မဟုတ် PE ဖြစ်ပါစေ) ။ ငါအလွယ်တကူနှိုးဆော်ခြင်းနှင့်ငါသူမတည်ရှိငွေပမာဏကိုနှစ်ဆကြာရှည်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီကာလအတောအတွင်းမှာလည်းငါဟာလိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုမရှိခဲ့ဘူး၊
ကျွန်မတို့ပြိုကွဲပြီးတဲ့နောက်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ပဲစိတ်သက်သာမှုရခဲ့တယ်။ ငါပုံမှန် PMOed တောင်မှပျော်ရွှင်သောအဆုံးသတ်နှင့်အတူ par ည့်ခန်းмассажသွားတယ်။ ဒါက ၆ လလောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်။ ကျမတို့အတူတူပြန်လာတဲ့အခါ PMO နဲ့အနှိပ်ခန်းတွေကိုမရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ (ကြိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချလိုက်သည်။ ) လိင်ဆက်ဆံမှုသည်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်အလွန်ဆိုးရွားသည် ((အနည်းဆုံးတော့သူမအတွက်ဖြစ်သည်)) ကျွန်ုပ်သည် (အကြိမ်နှစ်ကြိမ်မှ လွဲ၍ မှလွဲလျှင်) ၎င်းကိုထရန်ပြdidn'tနာမရှိပါ။ တစ်မိနစ်ကျော်။ ဒီဆက်ဆံရေးဟာတစ်နှစ်ကြာခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာကျွန်မသူမရဲ့အော်ဂဇင်ကိုထိုးဖောက်ခြင်းမှတစ်ချိန်ကမပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ကျွန်မမပြောပါဘူး၊ ၆ လအစောပိုင်းကကျွန်မမှာအော်ဂဇင်များစွာပေးနေခဲ့တဲ့မိန်းကလေးပဲ။
ဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်ပြည်နယ်များအဖြစ်။ ငါ ED နှင့်အချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်နှစ် ဦး စလုံးခံစားနေရပြီးပုံရသည်။ ငါစိုက်ထူပြီးတာနဲ့ငါအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူစတင်ရန်စတင်သောအခါငါ (10-15 စက္ကန့်ကဲ့သို့) အလွန်လျင်မြန်စွာသုတ်ရည်လွှတ်လိမ့်မယ်။ ငါ ED ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် nofap wagon ကိုရောက်နေပြီဆိုပေမယ့်အချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာဘူး။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်သည့်အခါ၎င်းသည်အိပ်ရာဝင်ချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အိပ်နိုင်အောင်အမြန်ဆုံးပြီးစီးရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ငါထင်တာကမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းနှင့်အတူအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဟုထင်သည်။ မည်သူမဆိုအရင်ကဤမှတဆင့်ခဲ့သလား ငါအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ပိုမိုအဆင်ပြေဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှစိုးရိမ်စိတ်လျော့ပါးသွားမည်ကိုသိပြီး မှလွဲ၍ မည်သည့်အကြံဥာဏ်မျိုးမဆို။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း / Porn သည် PE ကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သင်ငယ်ရွယ်စဉ်ကဖမ်းမိမှာကိုကြောက်သောကြောင့်လျင်မြန်စွာ / အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ချင်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းကမင်းအလုပ်ကြိုးစားတဲ့အခါမင်းအလုပ်ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲပြီးတော့ခံစားချက်ကိုမပျော်ရဲဘူးဆိုတာကိုမင်းကိုသင်ပေးတယ်။ နှစ်များတစ်လျှောက်သင့်စိတ်သည်အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲကာစိုက်ထူမှုကိုတုံ့ပြန်မှုသည်လျင်မြန်စွာသုတ်သင်ပယ်ရှင်းကြောင်းသူ့ဟာသူသင်ကြားသည်။ ငါအသက်ငယ်စဉ်ကငါ့ကိုခဏတစ်ဖြုတ်အော်ဂဇင်တွန်းအားပေးခဲ့ရသည်မှတ်မိသေးသည်၊ ယခုတွင်ငါသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊
တူညီသောနိယာမသည် porn နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသင်ကြည့်သောအခါသင်အလွန်အမင်းခန့်မှန်းခြင်းခံရပြီးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းသည်တစ်ကြိမ်တည်းသာဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်သည်သင်ပြီးခါနီး၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်နာရီဒါမှမဟုတ် ၂ နာရီလောက်ကြာနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့သင်ဟာ ၁၀ မိနစ်လောက်သင်ခုတ်လို့မရဘူး၊ ညစ်ညမ်းမှုနဲ့မတူတာကသင်လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမိန်းမအတွက်ပျော်စရာမကောင်းလို့ခေတ္တအနားယူ၊ ထို့ကြောင့်လေဖြတ်ခြင်း၊ ၀ င်ခြင်းမပြုမီသင်အဘယ်ကြောင့်ထိုးနှက်ရသနည်း။
ဒီတော့အခြေခံအားဖြင့်ကျနော်တို့လိင်၏အာရုံခံစားမှုနှင့်စိုက်ထူခံစားရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက် rewire ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ပြန်ဖွင့်နေစဉ်အတွင်း, ငါတို့ခက်ခဲမြောက်မြားစွာကြိမ်နှင့်မ FAP ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသိရန်နှင့်တစ်ဦးအလိုအလျှောက်သုတ်ရည်လွှတ်ဖြစ်ခြင်းတစ်ခုစိုက်ထူဖို့တုန့်ပြန် unwire လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာအချိန်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်, အလွဲသုံးစားမှုနှစ်ပေါင်းတစ်ဦးမျှသာရက်သတ္တပတ်အတွင်းပြန်လည်နာလန်ထူမည်မဟုတ်,
ငါ့ကိုထက်မြောက်မြားစွာအသက်ကြီးမှပြောဆိုသည်သူတို့ကြာရှည်ဘယ်လိုအကြောင်းမေးကြပြီ။ အတော်များများကသူတို့ရှည်လျားသောသဘာဝကြာရှည်နှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ် masturbate ဘူးကပြောသည်။ သူ 20-30 မိနစ်ကြာပြောပါတယ်မူသောငါ့ဝမ်းကွဲသူ porn ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ် masturbate ပါဘူးသောအခါထိုရှည်ကြာပြောပါတယ်။
ဤတွင်ပွင့်လင်းဆွေးနွေးမှုအဘို့အကြှနျုပျ၏သီအိုရီဖြစ်ပါသည်: DE (နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်) မှခံရသူများသည် edging နှင့်တစ်ခုတည်း session တစ်ခုအတွက်အလွန်ရှည်လျားကြိမ် masturbated ခဲ့ကြပေမည်။ ငါ DE ရှိသည်နှင့်မည်ကဲ့သို့ဈနီးပါးအမြဲအခြေခံအားဖြင့်အော်ဂဇင်မတိုင်မီ 2-3 နာရီအထိ edging ခဲ့သည် masturbating ခဲ့သည်။ ယင်းကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ပါကအော်ဂဇင်မှအချိန်ကြာဦးမည်ကြောင်းလိင်တံနှင့်အတွေးအခေါ်တွေထဲမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ sensitivity ကိုလျော့နည်းသွားနိုင်ပါသည်။
သူတို့ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်အဖြစ်လျင်မြန်စွာ orgasming အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြသောကြောင့်ဒီတစ်ခါလည်းပုံမှန်အစည်းအဝေးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ရှိနေသော်လည်း PE (အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်) မှခံရသောသူတို့က, masturbated ပါပြီ။ ဒီကျော်မကြာမီနည်းထိခိုက်နစ်နာလိင်တံ sensitivity ကို (လျော့နည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွလျှောက်ထားသည်) ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဦးဆောင်အတွေးအခေါ်တွေ။
ပြန်ဖွင့်နေသောယောက်ျားများကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ချည်ထားသောအရာတစ်ခုသည် orgasms ကိုသုတ်ရည်ထုတ်ယူပြီးနောက်သူတို့၏စိုက်ထူမှုများသည်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်တည်ရှိသည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် PE သည်“ bug” ထက်“ feature” တစ်ခု၏ပိုဖြစ်သည်။
(နေ့ ၄၂) ကျွန်ုပ်တွင် PE အချို့ရှိသော်လည်းသိပ်မဆိုးပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ငါစကားပုံတစ်မိနစ်သည်လူဖြစ်။ , အဘယ်သူမျှမငါအော်ဂဇင်ပြီးနောက်ငါ၏အစိုက်ထူဆုံးရှုံးခဲ့ရဘူး။ ဒုတိယအကြိမ်မတိုင်ခင်အရူးအမူးလုပ်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါသွားဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်၊ လိုက်တယ်နှင့်အလွန်အေးမြ!
ကျနော်တို့နှင့်အတူညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED နှင့်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ပေါင်းသင်း desensitization ဒါမှမဟုတ်ဘာကျနော်တို့ Desensitization တစ်ဦး "။ ထုံအပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှု" ဟုခေါ်သောအကျိုးကို circuitry အတွက် dopamine အချက်ပြတစ်ဦးကျဆင်းမှုပါဝငျသညျ။
desensitization အပြင်, တိုင်း porn စှဲလမျးသူ ာင်းဖွံ့ဖြိုး, porn အသုံးပြုရန် Pavlovian မှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်၏။ (ကြည့်ရှုပါ အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား?) ဤအချက်သည် (ပုံကိုမြင်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ တစ်ယောက်တည်းနေခြင်း) ဆုလာဘ် circuit ကိုပြင်းထန်စွာတက်ကြွစေခြင်းနှင့် porn အသုံးပြုရန်တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်တစ်စုံတစ်ခုအားပိုမိုသိရှိလာသည်နှင့်အမျှအပြုအမူသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်လာလေလေအစွမ်းအစများပိုမိုပျော်မွေ့လာရန်မျှော်လင့်ချက်ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာလေလေဖြစ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်နှင့်အတူယောက်ျားသည်မြင့်မားသောအခြေအနေကိုနှိုးဆော်ခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာသုတ်ရည်လွှတ်ဆီသို့ ဦး တည်သွားစေသည်အလွန်အစွမ်းထက် (sensitized) လမ်းကြောင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါပြီ။ ၎င်းသည်တစ်ဝက်ခက်ခဲသောလိင်အင်္ဂါများနှင့်အတူအော်ဂဇင်များကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသည့်သမိုင်းကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ငါသာမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။
သင်၏အထုပ်ကိုအသုံးမပြုစဉ်ကျန်းမာစွာထားရန်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်တံပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ကြွက်သားများတည်ဆောက်ရန်အထောက်အကူပြုသောကောင်းမွန်သော kegel လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုချမှတ်လိုက်ပြီးခြောက်သွေ့ခြင်း (သို့) အပြန်အလှန်အော်ဂဇင်ပြုခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ သင် PE မှခံစားနေရပါက၎င်းသည်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ ထိုအခါမူကား၎င်းသည် kegels မဟုတ်ပါ ပြောင်းပြန် kegels။ ၎င်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးသင့်ကိုတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကိုသက်သာစေပြီးတင်းမာမှုလျော့နည်းစေသည်။ PE မကြာခဏတင်းတင်းတင်ပါးဆုံရိုးကြမ်းပြင်၏ရလဒ်ဖြစ်သောကြောင့်ဤသည်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ သင်နှင့်ကိုက်ညီသောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်သင့်သည်။ PE မှသင်ခံစားရလျှင် kegel များများမသုံးပါနှင့်။ အဲဒီအစားပြောင်းပြန် kegels အာရုံစိုက်ပါ။ သင်ဤအရာအားလုံးကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည် ဒီမှာ or ဒီမှာ.
အသက် ၂၅ - ကျွန်ုပ်သည်ပြင်းထန်သော PIED နှင့်အချိန်မတန်ဘဲသုက်လွှတ်မှုခံစားခဲ့ရသည်
လိင်သည်လုံးဝအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ (ငါယခင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ ကျွန်ုပ်သည် porn ကိုကြည့်ရှုခြင်း / ကြည့်ရှုခြင်း၌ကျွန်ုပ်၌အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုနည်းပါးပြီး၊ ယခုပျောက်ကွယ်သွားပြီ) ငါသုတ်သင်ခြင်းကိုငါထိန်းချုပ်နိုင်သည် (ထိုအရာကိုဖော်ပြသင့်သည်) ။
ကျွန်ုပ်၏မိန်းကလေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောဆက်သွယ်မှုမှာဤကမ္ဘာမှမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်ထိခိုက်လွယ်သောရင်းနှီးမှုဖြစ်သည် (သင်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်သင်၏စောင့်ရှောက်မှုကိုလျှော့ချပြီးသင်ပေးသည့်အရာကိုပြန်ယူသောအခါ၊ ငါခံစားချက်ကိုမရှင်းပြနိုင်သောလူ၊ နောက်ပြီးရှင်းပြစရာအကြောင်းမရှိဘူး၊ LINK
အသက် ၃၁ - အိမ်ထောင်သည် - PIED နှင့်အချိန်မတိုင်မီသုတ်ရည်လွှတ်မှုနှစ်မျိုးလုံးပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ကျွန်မတို့အချိန်ကြာမြင့်စွာဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့်အကောင်းဆုံးသောလိင်ဆက်ဆံမှုအချို့ရှိခဲ့သည်။
ငါ၏အ ED နှင့် PE အပေါ်မှာငါ့မှတ်ချက်များ။ အရှည်များအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်။
ငါဝယ်ယူအချိန်မတန်မီသုက် (PE) နဲ့လူတအဖြစ် Erectile အလုပ်မဖြစ် (ED) ၏အချို့သောပုံစံအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ငါကလူသူတို့အလွန်အကျွံနှင့် ပို. ပို. စိတ်ပျက်ဖွယ် porn အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပေါင်းသင်းသောထိုသူတို့၏အချိန်မတန်မီသုက်ကိုဖော်ပြရန်အဖြစ်ကိုငါ့ဇာတ်လမ်းတစ်နည်းနည်းဝေမျှဖို့ကြိုးစားသည့်အခါတက်လာသောပုံမှန်ထက်ပုံပြင်များအပေါ်မှတ်ချက်စေချင်ပါတယ်။
ဘလော့ဂ်များနှင့်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၌ပင်ကျွန်ုပ်ကြားလေ့ရှိသောအဖြစ်အပျက်မှာယောက်ျားများသည် porn ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်အလွန်လျင်မြန်စွာမှေးမှိန်ခြင်းမှသင်ယူခဲ့သည့် PE ကိုဖယ်ရှားလိုခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာသူတို့ဖမ်းမိခြင်းမလိုချင်သောသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုး) လျင်မြန်စွာလုပ်ရပ်လုပ်နေရန်) ။
ကြောင်းကယ့်ကိုအတိအကျကိစ္စတွင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတွေးမိ။ ငါ PE ကြုံတွေ့ရှေ့မှာငါ့ကိုငါ ED ခံစားခဲ့ရသညျ။ ကျွန်မပတ်ပတ်လည် 15 သို့မဟုတ်ဒါမှာအလွန်ပုံမှန်အတိုင်းလမ်းမခေါ်မယ်လို့ဘာ porn စောင့်ကြည့်တော့တာပဲ။ ဇာတ်လမ်း porn စွဲနှင့်အတူဝင်အဖြစ်ထိုအခါငါတိုးသောအရာတို့ကိုနှိုးဆွဖို့အညစ်ညမ်းဆုံးစွန်အထိခုန်စတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်အခြေအနေတွေ, tehn အုပ်စုများလိင်တွေထဲကရှုထောင့်သို့မဟုတ်လုပ်ရပ်အပေါ်ချဲ့ထားတဲ့ fetishes ထို့နောက်ကွဲပြားလိင်ထို့နောက်လိင်ပြီးတော့, ဗီဒီယိုဖြစ်လျှင်, google images ပေါ်တွင် Boob များအတွက်ရိုးရှင်းသောရှာဖွေရေးနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။
အစပိုင်းမှာတော့ငါမှာဘာပြhadနာမှမရှိခဲ့ဘူး၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဟာအတော်အဆင်ပြေတယ်၊ ကျွန်တော့်အတွက်ကျွန်တော့်ဖောက်ပြန်မှုကြီးထွားမှုကအဆအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပထမတော့ငါအများကြီးစလေ့လာမယ့်နေရာမှာ၊ ကျွန်မအသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်၊ အထက်တန်းကျောင်းနှစ်မှာကောင်မလေးတစ်ယောက်ရခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်မဟာ bukakke၊ pissing၊ မျက်နှာ၊ လိင်အလွန်အစွန်းရောက်လုပ်ရပ်များ။
ပထမတော့ကျွန်မရဲ့ GF နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကငါတို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ ငါ၌ရည်းစားရှိသော်လည်းငါသည်လည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အနေဖြင့်လည်းတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူမကိုသူမတွေ့ပါက ၄ ကြိမ်အလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထိုအခါငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်အခါကတစ်ခါတစ်ရံ၌ကျွန်ုပ်သည်စကားမပြောနိုင်တော့ပါ၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်ကစားခဲ့သည့်ဘောလုံးပွဲသို့မဟုတ်အခြား bullshit မှကျွန်ုပ်ခြေထောက်သည်နာကျင်သောကြောင့်ရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည့်အကြောင်းပြချက်များနှင့်အတူပေါ်လာလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤအရာသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူများအတွက်ရှင်းပြနိုင်သည်။ ငါမရှိတော့တောင်မှမထားနိုင်သည့်အခါဒါဟာတခြေလှမ်းထပ်မံမြင့်တက်လာခဲ့သည်။
ထိုနည်းတူစွာပင်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်အတူဖြစ်လာခဲ့သည် ... ငါရိုးရိုးငါကတက်ရဖို့အခက်အခဲရှိခဲ့သည်, ED နှင့် PE ချိတ်ဆက်ဘယ်မှာငါအဘို့အလာ။ ငါအပြည့်အဝနှိုးဆွခြင်းနှင့်စိုက်ထူခံရဖို့အလွန်ခက်ခဲအချိန်ရှိခြင်းနေစဉ်ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်နှင့်ဆက်လက် cumming ကနေပျော်ရွှင်ခံစားချက်တွေကို၏အလုအယက်ရရန်လုံးဝအနိုင်အထက်ခဲ့သည်။ ငါ့ငပဲလုံးလုံးမခဲယဉ်းဘူးဆိုတာ (မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ) မည်သို့ပင်ဖြစ်စေငါဟာအသည်းအသန် cum လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ငါမတိုင်မီနံနက်ယံ၌၎င်း, အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်, တစ်ချိန်တည်းအားလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုက်ဖို့အတင်းအကျပ်ပြုလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးရန်အချို့သောတိုက်တွန်းချက်များကြောင့်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ပင်ချိုချိုသာသာဖြစ်ခဲ့ရသည်။ နောက်တဖန်ထိုတိုက်တွန်း porn နှင့်အထွေထွေလိင်စွဲ၏အခြေအနေတွင်သဘာဝကျပါတယ်။
သို့သော်ယခုအော်ဂဇင်ကိုအပြင်းအထန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်း (အထူးသဖြင့်တကယ့်ကိုချိုချိုသာသာဖြစ်ခြင်းမဟုတ်သလိုကျွန်ုပ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့်လမ်းစဉ်၌မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်းကိုအာရုံစူးစိုက်မှုဖြင့်) အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်လှုံ့ဆော်မှုအနည်းငယ်သာဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစတင်သင်ကြားခဲ့ပြီး PE သည်စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဤအရာသည်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟုရှုမြင်ပြီးလျှင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားခြင်း၏ရိုးရာအစဉ်အလာအားဖြင့်ပြောခဲ့သောဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏သာမန်နေ့ရက်များတွင်သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောရန်အကြောင်းနောက်ကြောင်းပြန်စကားပြောခြင်းကိုမှတ်မိပြီးကျွန်ုပ်တို့တကယ်လိုချင်ပါကစက္ကန့် ၃၀ အတွင်းအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံး (ရယ်မောစွာ) အတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုအချိန်ကဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဘယ်တော့မှမ
ED စတင်ခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်ကြွက်သားများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားများကိုအာရုံစိုက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်အားကိုယ့်ကိုယ်ကို cum လုပ်ရန်လိုအပ်သည် (မကြာခဏမဟုတ်ဘဲစက်ယန္တရားဆန်ဆန်) လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယန္တရားဖြစ်လာခဲ့သည်။ GF သည်လိင်အကြောင်းအခြားအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ကြာမြင့်စွာကတည်းကပျောက်ကွယ်သွားပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကောလိပ်မှဘွဲ့ရခဲ့သည်။ ငါနှိုးဆွဖို့ကြိုးပမ်းမှုကငါ့ကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာထဲဆွဲဆောင်သွားတယ်။ ကျောက်ဆောင်အောက်ခြေမှာ beastiality and Incest (လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေထဲကလူသားထုကိုလုံးလုံးလျားလျားဖယ်ရှားပေးလိုက်သောညစ်ညမ်းသောပုံသဏ္twoာန်နှစ်မျိုး) ကိုရောက်ရှိသွားသည်။ အခုငါညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုတည်ရှိခြင်းကိုသိလျှင်ငါရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကောလိပ်ကျောင်းလေးနှစ်လုံးလုံးစိတ်ကျဝေဒနာနှင့်ဘဝ၏အခြားဆိုးကျိုးများရှုထောင့် မှနေ၍ ဆက်လက်လေ့လာခဲ့သည်။
ဒီနည်းကိုဝေးလံ ME သင့်အာရုံစိုက်ရှိသူတို့ Brave အသက်ဝိညာဉ်ကိုငါသင်ချီးကျူး AND ငါကောက်ချက်ချရလိမ့်မည်။
ယခုငါပြုမူသောအပြုအမူများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဤအကျင့်ယိုယွင်းမှု၏ဤအယူအဆအားငါကြည့်နေသည့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောဤနားလည်မှုအသစ်နှင့် တွဲဖက်၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကို ဦး တည်စေသောစိတ်ကူးကိုအော်ဂဇင်၏လုပ်ရပ်မှကာမဂုဏ်ခံစားမှုအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အထွတ်အထိပ်၏တိုတောင်းသော spurt နှင့်ကြွက်သားမှတ်ဉာဏ် twitch ။ PE ရရှိသောသူများအတွက်သင်၏သင်၏အပြုအမူအသစ်များနှင့်သင်၏ PE စတင်ခြင်းနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်လာသောသင်၏ခံစားချက်အသစ်နှင့်ခံစားမှုအသစ်များကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တောင်းဆိုသည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအနတ္တမရောက်မီအော်ဂဇင်သည်လုံးဝထူးခြားဆန်းပြားလှသည် (ကျွန်ုပ်၏ဒူးဆစ်ဒြပ်ဆွဲအားကလှုပ်ခါလိမ့်မည်) သို့သော်ယခုငါလုပ်ရပ်အပေါ်အမှန်တကယ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမရှိမျိုး (နှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်အတူ) နှင့်အတူစက်မှုလှည့်ကွက်နှင့်အတူ cum ။
ကွဲပြားခြားနားသောခံစားရနှင့်ခြေဆွံ့သောသူ။ မင်းရဲ့အော်ဂဇင်တွေဟာတိုတောင်းပေမယ့်သိသိသာသာအရေးမကြီးဘူးဆိုရင်ဒီပြproblemနာတူညီတဲ့သူတွေရှိတဲ့ယောက်ျားတွေ၊ ငါမင်းကိုသိချင်ပါတယ်။ အဲဒါဟာစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်လာပြီလား။ (မင်းဒီလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကမင်းအတွက်ဖြစ်လာပြီလားဆိုတဲ့ခံစားချက်အတွက်ဒီစကားလုံးကအဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့လား။ ) ငါ Old Me ဆီကိုပြန်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။ ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေကိုကုထုံးအားဖော်ပြရုံသာမကကျွန်ုပ်၏ PE စတင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏မူလ ED မှမည်သို့ခံစားရသည်ကိုအာရုံစိုက်ရန်ကြိုးစားခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုလှည့်ရမလဲ မသေချာဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီပြproblemနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှသင်၏ခံစားချက်များကိုကျွန်ုပ်ထံပြန်တောင်းပန်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအများစုအတွက် PIED နှင့် PE ခံစားခဲ့ရသည် (ကျွန်ုပ်သည်ယခုအသက် ၃၈ နှစ်) PE နှင့် ED မကောင်းသောပုံမပေါ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှိတတ်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် PE ။ ဒီမှာငါ့သီအိုရီပါ။
ငါအသက် ၁၂ နှစ်မှာ PMO ကိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာ၊ ငါ့ညီရဲ့ညစ်ပတ်တဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေကနေခိုးယူထားတဲ့စာမျက်နှာတွေနဲ့အတူအော်ဂင်ဂါဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတယ်။ နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာကျွန်မရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအော်ဂဇင်အဆင့်အထိမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိရောက်စွာရောက်ရှိနိုင်အောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တစ်ယောက်ကိုတစ်နာရီမသွင်းရန်တစ်နာရီမပိုလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စတင်ဖမ်းဆီးခြင်းမခံရရန်လိုအပ်သည် (သင်ပိုမိုလုပ်လေလေရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အခွင့်အလမ်းများလေ)၊ သို့သော်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်မိဘများ၏အိမ်မှပြောင်းရွှေ့လာသည်နှင့်အမျှ fap ကိုခိုးယူရန်ဖြစ်လာခဲ့သည် အချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိသောပြတင်းပေါက်သို့ - ဇနီးအိမ်သို့မသွားခင်၊ အလုပ်ခွင်၌အိမ်သာများစသဖြင့်
တစ်ချိန်တည်းမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးတာနဲ့မလွှဲမရှောင်သာဆိုင်းငံ့ထားလိုက်တယ် အချိန်ဇိမ်ခံမှုဖြစ်သည့်အခါပျော်ရွှင်မှုကိုကြာရှည်ရန်အတွက်အနားသို့ ကပ်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်။ ဒါပေမယ့်ဒီပြtheနာက PE ပြissueနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး၊ ပိုဆိုးတာကပိုဆိုးစေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်အနားမှာထားဖို့အားစိုက်ထုတ်မှုနည်းလေလေကောင်းလေပဲ။
ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်ပျက်စရာအကြောင်းပိုမိုဖြစ်လာခဲ့သည် (ငါ PE'ed ပြီးနောက်သူမမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်ကိုအမြဲတမ်းသေချာစေခဲ့သည်) တခါတရံငါအပြည့်အဝထိုးဖောက်သည်အထိကြာရှည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အကောင်းဆုံးအချိန်များ၊ မိနစ်အနည်းငယ်။ ဝမ်းနည်းပါတယ်
ငါနofapလုပ်နေချိန်မှာသူမလိုချင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါကသင့်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူလာစေဖို့လမ်းပြန်လမ်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမအတွက်တော့မမျှတဘူး။ ငါလည်းသူမအတွက်နှိုးဆွနိုင်သေးသောကြောင့်၊ porn နှင့်သူမအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြိုးကြိုးတပ်ဆင်ရန်မျှော်လင့်နေသည်။ စိုက်ထူရုံမရှိသလောက်ကြာရှည်နှင့်မကြာခဏအားနည်းနေဖြစ်ကြသည်။ အရာအားလုံးကို reboot လုပ်ဖို့နဲ့ rewiring လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာကငါမိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအမှားလုပ်မိရင်ငါ့အမှားပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတဖန် digressing နေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏သီအိုရီမှာဤသို့ဖြစ်သည် - သင် (သင်နှစ်ခုလုံးရှိလျှင်) PE ကိုမလုပ်ဆောင်မီ ED ကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏အကြောင်းပြချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
PE အတွက်ရိုးရာနှင့်ထိရောက်သောကုသနည်းများသည်ချောက်ကမ်းပါးသို့မရောက်မီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစူးစိုက်မှုမရောက်မီအပန်းဖြေခြင်းပါဝင်သည်။ အကယ်၍ သင်အသက်ရှုခြင်းအတွက်ခေတ္တရပ်တန့်တိုင်းစိုက်ထူခြင်းကိုသင်မဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။ သင်ဤပစ္စည်းပစ္စယနှင့်အတူအကြောင်းကို messing မတိုင်မီခိုင်မာတဲ့, ရေရှည်စိုက်ထူလိုအပ်ပါတယ်။
PE နှင့် ED နှစ်မျိုးလုံးခံစားနေရသောအခါ၊ Ereation ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့် PE အတွက်စာရွက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာမင်းရဲ့လိင်အင်္ဂါလက်လွှတ်လိုက်တာနဲ့တူတူပဲ။ ဒါဟာငါစိုက်ထူတာကိုဆုံးရှုံးပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတင်းအကျပ်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့အော်ဂဇင်ရတယ်လို့မခံစားရဘဲနဲ့သုက်ထွက်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်၊ ။
သို့သော်၊ သင်သည်ရေရှည်တည်တံ့သောစိုက်ထူမှုတစ်ခုရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်သည်အသက်ရှူကိရိယာများကိုရပ်တန့်နိုင်ပြီးပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ငါထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်အခါတိုင်း, ငါသည်အခြားအသက်ရှူမယူမီအနည်းငယ်ပိုအချိန်အဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်တွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။ အကြိမ်တစ်ဒါဇင်လောက်အကြာမှာမင်းအိပ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကိုကြာမြင့်စွာသွားနိုင်ပြီးယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့်ကူညီခြင်းစတဲ့ရော့ခ်ကြယ်ပွင့်တစ် ဦး လိုခံစားလာနိုင်ပါတယ်။ ငါပိုကြာကြာ reboot နှင့်အမှန်တကယ်နှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့ပုံမှန်လျောက်ပတ်သောစိုက်ထူကြသောအခါငါ couse ၏, ငါပိုပြီးယုံကြည်မှုနှင့်အတူဤပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်မှာအခြေခံအားဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပါဘဲ stop-start နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ငါခိုင်မြဲစွာ PE (အနည်းဆုံး, PIED နှင့်ဆက်စပ်သော) မြန်နှုန်းအဘို့ကိုယျခန်ဓာလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်အချို့အလေ့အကျင့်နှင့်အတူ, သင်ကပြန်လေ့ကျင့်နိုင်မတော်မူပြီးမှအကြောင်းယုံကြည်ပါတယ်။
nofap ကိုစကတည်းကချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့်တစ်ချိန်ကငါကအစကတည်းကအလွန်နှေးကွေးခဲ့သည်။ အများအားဖြင့်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အတူတကွပူးပေါင်းခြင်း၏ခံစားချက်ကိုသာခံစားကြသည်။ အဓိကသော့ချက်မှာအလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ပုံရသည် - သွေးဆောင်မှုသည်တင်းမာမှုကိုမြင့်တင်ရန်နှင့် PE ကိုစိတ်ပူရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤသည်မှာ (က) စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်စာရွက်ဖြစ်ပြီး၊ ခ) သင်ပိုမိုတိုက်ခိုက်လေမြန်လေဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤနောက်ဆုံးအချက်သည်မိုက်မဲသည်ဟုထင်ရသော်လည်းလိင်မှုနှိုးဆွခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်တွင်တင်းမာမှုများနှင့်တင်းမာမှုများကိုလွှတ်ပေးခြင်းပါ ၀ င်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်တင်းမာနေပြီး PE လက္ခဏာများကိုသတိထားပါကသင်သည်တင်းမာသောအခြေအနေ၌ရှိနေပြီးဖြစ်သည် - အနားယူပြီးပျော်မွေ့ပါ။ dopamine မီးများများကိုအော်ဂဇင်ပြုခြင်းနှင့်ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့်မမြှုပ်နှံပါနှင့်။
ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေအထိငါ ၁၃ နှစ်ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကိုသတိမပြုမိခဲ့ဘူး။ ငါကြို့ထိုးခြင်းမရှိဘဲညစဉ်ညတိုင်းလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်ကအဆိုးဆုံးပဲ၊ ငါစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်၊ စိုးရိမ်ခဲ့တယ်၊ စိတ်ဆိုးနေတယ်၊ ​​စိတ်ရှုပ်ထွေးတယ်၊ ငါဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်မရဲ့စိုက်ထူမှုများဟာအားနည်းနေတာကိုသတိပြုမိခဲ့သည် နှင့် ငါအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ရှိသည်။
NoFap ငါ၏အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED), နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (DE) နှင့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ် (PE ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ)
[အသစ်ထွက်လာတဲ့ကောင်လေး PE ကိုတိုင်ကြားချက်အကြံပေးချက်] ငါအဲဒီမှာရှိနေပြီးနားလည်ခဲ့တယ်။ သင်သည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ရေးနေသော်လည်း၊ ထိုအချိန်အတောအတွင်းတွင်လိင်သည်မိမိကိုယ်ကိုပျော်မွေ့စေရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး၊ အဆုံးပန်းတိုင်သည်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသင်ကိုယ်တိုင်သင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာသင်ကြားပေးခဲ့ပြီး၊ ။ အချိန်အနည်းငယ်ယူမယ်၊
ငါအရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ကိရိယာတခုကိုတွေ့ပြီ။ (ဒါကစပြီးသွားပေမဲ့ငါ့ကိုကူညီပေးတယ်) Trojan (သို့) တခြားကုမ္ပဏီတွေကကမ်းလှမ်းလာတဲ့သုက်လွှတ်မှုကွန်ဒုံးကိုသုံးဖို့ဖြစ်တယ်။ နည်းနည်းလောက်သုံးတာကသန္ဓေတည်ခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ သင်အဲဒီလိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ fap မပါတာကသင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ငါငါ့ကိုအနှောက်အယှက်ခဲ့ကြသောအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ခံစားရတယ်။ အဘယ်သို့ငါယခုနားလည်ကျနော်တို့ arousal ၏အဆင့်ရှိသည်။ အဆိုပါပြဿနာကိုငါ့ဥာဏ်နှင့်တကွဖြစ်ခဲ့သည်။ pre-E ကို FULL arousal ရောက်ရှိပြန်၏နောက်ဆုံးအဆင့်ရဲ့အစွန်းကနေကိုင်ပြီး, ဒါပေမယ့်ကြိုတင်အဆိုပါအဆင့်တွင်တည်းခိုနဲ့ကျွန်မအဆင်သင့်ပါပဲအထိဇာတျသိမျးရှောင်ရှားအကြောင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ငါနေ့စဉ် ၂-၃ ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါအချိန်ရောက်လာသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အဝမထွန်းကားသေးကြောင်း၊ အော်ဂဇင်မတိုင်မီ ၂-၃ မိနစ်သာခံနိုင်ကြောင်း၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကိုယ်ထိလက်ရောက်လှုံ့ဆော်ရန်စသည်တို့ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ထိုင်ခုံသို့မဟုတ်ငါ့နောက်ကျောကိုတင်သောအခါမှသာထရပ်နေတဲ့စိုက်ထူရနိုင်ဘူး။ ယခု ၁-၂ ပတ်တိုင်းတစ်ကြိမ်သာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရုံသာ (အပြည့်အဝပြန်လည်လည်ပတ်မှု၏ ၈ ပတ်မှ ၁၀ ပတ်အထိကြိုးပမ်းနေဆဲ) မှသာလျှင်ငါ ၁၀၀% စိုက်ထူနိုင်သည့်အရည်အချင်းကိုကျွန်ုပ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂရပ်လုပ်သည့်အခါ ၁၀ သို့သွားနိုင်သည်ကိုသတိပြုမိသည် တစ်ကြိမ်မှာ ၁၅ မိနစ်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုအလွယ်တကူလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပြီး၎င်းသည်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်၊ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ငါထရပ်နေစဉ်စိုက်ထူခြင်းကိုရနိုင်သည်။
masturbating ဖြတ်အစဉ်အမြဲငါ, ငါ၏လိင်အသက်အဘို့ပြုကြ၏ကိုအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါနေဆဲလေ့လာသင်ယူရန်တွေအများကြီးရှိသည်ပေမယ့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ပတ်သတ်ပြီးအချို့အလွန်အပြုသဘောဆောင်သောအရာတို့ကိုသတိပြုမိပါတယ်။
ငါကငါ့ ED ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းရှိမရှိကြည့်ဖို့သင်တို့ကိုဖြစ်ကောင်းအများကြီးနဲ့တူ nofap စတင်ခဲ့သည်။ ငါကျော်ရရန်လိုအပ်သည်ရုံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဖြစ်ခဲ့သည်သိတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးစဉ်းစားမိတာတွေအားလုံးထလာလိမ့်မယ်။ ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေလို့ငါမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ တစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့တညတည်းခိုခန်းတွေရဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်၊ တကယ်တော့ငါဂရုစိုက်ခဲ့တဲ့သူနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှက်စရာမလိုချင်ဘူး။ (ဤသည်မှာဤနေရာတွင်တော်တော်များများဖြစ်ပျက်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ) ကျွန်ုပ်သည်မစုံလင်သည့်လများအတွင်းတစ်ညအိပ်မက် ၃ ခုရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်ထနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ချက်ချင်းရောက်လာခဲ့တယ်။ ဒါဟာစူပါအဆင်မပြေခဲ့ငါအရင်ကထက်ပိုဆိုးခံစားရတယ်။
ဒီမှာစာဖတ်ခြင်းအချို့ကိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ငါချိတ်ဆက်ရန်မဟာဗျူဟာကိုမြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ခဏကြာတော့ငါတကယ်ဆက်သွယ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ လိင်မှုကိစ္စကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြုခြင်းဟာကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဟာမကြာခဏလိုမျိုးမကြာခဏပြီးဆုံးဖို့စိတ်မပူခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကနည်းနည်းလောက်စောင့်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်မံကြိုးစားကြည့်လိုက်တယ်၊ ကျနော်တို့လအနည်းငယ်တလျှောက်ပုံမှန်ချိတ်ဆက်နေပြီးလိင်ကတကယ့်ကိုအံ့သြစရာပါပဲ။ ED သို့မဟုတ် PE ကိုစိတ်ပူနေသည့်ယောက်ျားများ၊ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်းသည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းတောင်မှသင်နှင့်အတူအမှန်တကယ်ဖြစ်လိုသူတစ် ဦး ကိုသင်တွေ့ပါကအရေးမကြီးပါ။ ဒါဟာဘာမှမကဲ့သို့အလေ့အကျင့်ကြာပါသည်။ nofap ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကကျွန်တော့်အတွက်တော့နည်းနည်းလေးပဲ။ မူရင်းပို့စ်
ငါထပ်တူထပ်မျှခံစားခဲ့ရသည်မှာမခက်ခဲသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အော်ဂဇင်စရိုက်ကဲ့သို့ခံစားခြင်းဖြစ်သည်။ porn ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့သူတို့ကအခုတော့သဘာဝမဟုတ်တော့ဘူး။ သီအိုရီတစ်ခုပဲ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဗီဒီယို porn ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးနောက်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ထူးဆန်းသောစိတ်ကူးယဉ်မှုများဖြင့်စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများအားလုံးကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်သည်အထိတိုးတက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ထိုပြင်းထန်သောချိုင့်ဝှမ်းများမှေးမှိန်မှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးမှာကိုက်ညီမှုပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးတက်အောင်။ ထိုအတွေ့အကြုံများ၏ပြင်းထန်မှုသည်အနည်းငယ်နစ်မြုပ်သွားသည်နှင့်အမျှအခြားအရာတစ်ခုခုလည်းပေါ်လာလိမ့်မည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခွဲကျော်ကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တွင်မလှုပ်ရှားနိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ မိန်းကလေးမျိုးစုံနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အခွင့်အလမ်းရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်ထိုးဖောက်ရန်ခက်ခဲသောအချိန်တိုင်းတွင်ရှိသည်။ ဒါဟာငါ့ကိုစိတ်ပျက် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေစဉ်အတွင်းလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ် မှလွဲ၍ ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိခဲ့ပါ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကကျွန်တော့်ကိုဒေါသထွက်စေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါသာအပြာရောင်ဘောလုံးတွေရလိမ့်မယ်။ တကယ်ပဲလှပသောခန္ဓာကိုယ်ရှိသောလှပသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်ကိုခက်ခဲစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ခုခုကမှန်တယ်။
ဒါပေမယ့်ငါအင်တာနက်ပေါ်မှာညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတစ်မိနစ်တောင်မကြာလိုက်ဘူး။ ရယ်စရာ။ ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲတစ်လအကြာလိင်ဆက်ဆံစဉ် orgasm နှစ်ခုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့ပြန်သွားသည်။ တစ်ပတ်အကြာတွင်ငါထပ်မံလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ လိင်ဆက်ဆံရန်အလွန်နီးကပ်နေသည့်နောက်ထပ်ပူပြင်းသည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး သည်လက်ဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုအချို့ပြုလုပ်ခဲ့ရာကျွန်ုပ်သည် ၁၅ စက္ကန့်အကြာတွင်အချိန်မတိုင်မီရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ငါပင်တစ်ဝက်ခက်ခဲမဟုတ်သကဲ့သို့ငါသူမ၏ရပ်တန့်။ ငါထနိုင်ဘူး, ဒါပေမယ့်နီးပါးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သုက်။ ဒီတော့လိုက်တယ် freaking ။
[reboot မှတဆင့်တစိတ်တပိုင်း] ဒီနေရာမှာများစွာသောငါတို့လိင်တံကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာတည်ဆောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခြေအနေရှိသည်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်လာသည်နှင့်အမျှလုံးဝလုံးလုံးလျားလျားဖြစ်လာသည်။
[PMO မရှိ5ရက်] ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးကြယ်တစ်လုံး၏ဓာတ်ပုံများကြောင့်ကျွန်ုပ်အစပျိုးခဲ့သည်။ ငါအစားစစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများအကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ရယ်စရာကတော့ငါ့လိင်တံထဲမှာဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ဘူး။ တကယ်တော့ငါကအော်ဂဇင်စ်ခံစားခဲ့ရသလိုခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့လိင်တံလုံးလုံးမခက်ခဲဘူး။
LINK - ငါအတူတူလှေပဲ ကျွန်ုပ်၏ ED တိုးတက်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည် ED နှင့် PE နှစ်မျိုးလုံးသည်ကျွန်ုပ် gf အသစ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဟန်ရှိသည်။ အောင်မြင်စွာဆိုလိုတာကစိုက်ထူခြင်းကိုတစ်ခုလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးဆိုလိုတာကသူမကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ချန်ထားနိုင်ခြင်း။ ငါကအချိန်တိုင်းဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုမသေချာသေးသော်လည်း၎င်းသည်လာမည့်အချိန်တွင်အတော်လေးနည်းနည်းလေးအထောက်အကူဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
မရ ED, မဟုတ် DE, ဒါပေမယ့် PE (အချိန်မတန်မီသုက်!)
YBR နှင့် YBOP ရှိများစွာသောလူတို့သည်“ porn induced” Erectile Dysfunction (ED) နှင့် Delayed Ejaculation (DE) ရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအချို့သည် (လူနည်းစုသာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်) သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုမှအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်း (PE) ရှိသည်။
အဓိပ္ပာယ်အကျယ်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရလျှင် PE သည် ED ၏အစိတ်အပိုင်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ PE သည်ကမောက်ကမဖြစ်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် PE သည် ED နှင့် DE တို့၏ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေဖြစ်သည်။ ငါ့ကိစ္စမှာတော့။ ငါအရမ်းမြန်အလွန်မြန်ရ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုစိုက်ထူခြင်းသည်အလွန်အထိခိုက်မခံသော (hyper-sensitive) သုတ်ရည်လွှတ်မှုကိုအလွယ်တကူလွယ်ကူစေသည်။ ကျွန်တော်ပြန်မတင်ခင်၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အလွန်ခဲယဉ်းပြီး ၁၂ နာရီတွင်အာရုံစူးစိုက်။ ရပ်နေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံရှိအရေသည်ကျော့ကွင်းကဲ့သို့တင်းကျပ်စွာဆန့်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်လောင်ကျွမ်းနေသောဒုံးပျံဖြစ်သည်။ ဒုံးကျည်ပေါ်တွင်ထိုင်။ ၁၀ စက္ကန့်၊ ၉၊ ၈၊ ၇၊ ၆၊၅၊၄၊၂၊ …… ..12၊ ORGASM ဖြင့်စတင်သည်။ “ စိတ်မကောင်းပါဘူးပျားရည်” ဟူသောစကားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်လာသည်။
ဒါပေမယ့်ဒီကနေ့ ၅၂ ရက်ပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော့်လိင်တံဟာဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်တဲ့နေရာမှာမရှိတော့ဘူး။ ၁၀ နာရီမှာရပ်တယ် ငါ့မှာပျော့ပျောင်းပေမဲ့ပိုကြီးတဲ့စိုက်ထူရှိသည်။ ကျွန်တော့်ကိုမှားယွင်းအောင်မလုပ်ပါနှင့်။ ၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပလတ်စတစ်ပိုများပြီးတင်းကျပ်မှုနည်းသည်။ ၎င်းသည်ထိခိုက်လွယ်မှုနည်းပါးသော်လည်းပေါက်ကွဲရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးအကြီးဆုံးကတော့အခုငါကြာရှည်ခံနိုင်မှာပါ။ re-boot ငါ၏အ porn သွေးဆောင် PE အပေါ်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်!
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ“ ယောက်ျားအချို့သည်အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို PE အသုံးပြုခြင်း၊ အချို့သောယောက်ျားများသည် DE ကိုရခြင်းဖြစ်သည်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
အစဉ်မပြတ်ငါအလျားလိုက်လက်သီး humper သို့မဟုတ်ကျရောက်နေတဲ့ mastubator ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကိုကျွန်တော်ရေချိုးခန်းထဲမှာရပ်ပြီးငါ့နောက်ကျောကိုဘယ်တော့မှတင်လို့မရဘူး။ ငါသည်လည်းအစများစွာရှိပြီး၊ ဒီဟာတွေက ED (သို့) DE (DE) ကိုဘာလို့ငါတီထွင်တာလဲ၊ သဲလွန်စဖြစ်လို့လား။
ငါမရှိတော့ငါ re-Boot တက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ဘူးသောအစွန်းရောက် PE ကြုံနေရနေပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုအမြဲဖွင့်ပါကအချို့သောမျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းခဲ့ယူဆမိသောကြောင့်ကယ့်ကိုအံ့ဖွယ်ပါပဲ။ ငါ YBOP တွေ့ရှိခဲ့သည်အထိငါကဖြစ်နိုင်သည် porn-သွေးဆောင်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အစက်မချိတ်ဆက်ခဲ့ပေ။
ငါဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာအရှည်ဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ငါပြန်ကောင်းလာတာနဲ့အမျှငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်၊ ​​ရလဒ်တွေမရှိတာကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးသူတွေအတွက်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့် - တသမတ်တည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ရခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လုပ်ပေးသည်။ ကြောင်းစိတ်ပျက်ခြင်းမပြုမီငါမြင်အားလုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ Reboot ပြပြီး ၇ လမှစပြီးလိင်မသွားခင်မှာပရောပရည်ပြုခြင်း၊ အိပ်ခြင်း၊ ဒါကတဖြည်းဖြည်းငါ့ကိုနောက်တဖန်သွားတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့အချိန်တိုအတွင်းခဲယဉ်းပြီးထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ဖို့“ မြန်မြန်ဆန်ဆန်” ခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်အချိန်တိုင်းမှာငါ့စိုက်ထူမှုတွေကပိုမိုအားကောင်းလာတယ်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ PE ၏မြင့်မားသောအဆင့်များကျဆင်းသွားသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ငါ့ချစ်မြတ်နိုးရသူကိုညင်ညင်သာသာနမ်းခြင်းအားဖြင့်ရုန်းထွက်နိုင်သည့်အရည်အသွေးနှင့်လုံးဝပြissuesနာမရှိပါ။ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့လုံးဝဆန္ဒမရှိဘူး၊ ပြီးတော့လိင်စိတ်နိုးထစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်လိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာတယ်၊ ငါစတာမှာမှတ်ချက်မရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းပိုကောင်းလာတယ်။ ငါအခက်အခဲလုံးဝမရှိဘဲတစ်ညမှာသုံးကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့လို့ဒီခရီးစကတည်းကငါဘယ်လောက်အထိရောက်လာခဲ့သလဲဆိုတာမယုံနိုင်ဘူး။
တစ်ဦးကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက် Get (မင့်လိင်) တစ်စုံတစ်ဦးကိုအတူချိတ်ဆက်ဖို့အချိန်ကိုယူ, ထိုသို့ဖော်ပြရန်လွန်းအင်အားကြီးတစ်ရပ်အတှေ့အကွုံဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးငါ့အဘို့ဤမျှကာလပတ်လုံးတာနှင့်အတူ, ငါသာယခု မှစ. တစ်နှစ်ပြောင်းလဲမှုများစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်။9လကြာပြီးနောက်နဲ့ကျွန်မတစ်ဦးပြောင်းလဲယောက်ျားသည်ဖြစ်၏။ ငါထွက်ရှိရုန်းကန်နေသူအပေါငျးတို့အဘို့ဤနောက်ဆုံး update ကိုဝေမျှဖို့တာဝနျရှိသညျဟုအဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်ငါဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာမှတဆင့်သွားကြဖို့ရှိပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Fellas fellas fellas !!!! ဒီအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာပါ။ ဘယ်သူကမှငါ့ကိုမပျောက်စေချင်ဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်သူအလုပ်လုပ်ခဲ့ရှိမရှိကြည့်ရှုရန်ပထမ ဦး ဆုံးအခွင့်အလမ်းရခဲ့တယ်။ ငါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ PE အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ခဲ့တာလို့ယုံကြည်တယ်။ ၁၀ မှ ၄၀ စက္ကန့်။ အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူအကြောင်းကို 10% မှတိုးတက်ပါပြီ။
ငါဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသက်သေပြနေတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းက pmo လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုအားစိုက်ပြီးထိန်းထားရမယ်။ ငါရက်ပေါင်း 90 အတွင်းပြန်ပြောင်းတစ်ခုရှိခဲ့ပေမယ့်ငါအသစ်တစ်ခုကိုမိန်းကလေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ရှိမရှိကြည့်ရှုငါ့အခွင့်အလမ်းရတယ်။ ခံနိုင်ရည်ဟာဘယ်တော့မှအရင်ကလိုမရခဲ့ဖူးဘူး ငါမယုံနိုင်ဘူး !!! ငါ့အစာကျွေးခြင်းပြန်ပေးခဲ့ကြသူတစ်စုံတစ် ဦး ကလာအောင်နှိုးဆွမျှော်လင့်ပါတယ် ... အားကြီးသောဖြစ်နှင့်သင်ဆုလာဘ်လိမ့်မည်။ (link - Edrummond မေလ 18, 2012 )
[ခေတ် 53, porn သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲ 101 ရက်ပေါင်း, ဒါပေမယ့်ဇနီးနှင့်အတူရံဖန်ရံခါလိင်] အစမှာငါ ED ပြproblemsနာတက်တယ်၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကြောင့်ငါယုံကြည်တယ်။ အခုငါ့ရဲ့စိုက်ထူမှုဟာ“ ခိုင်မာသောကျောက်တုံး” မဟုတ်ပေမယ့်သူတို့တွေဟာပိုပြီးနူးညံ့ပြီးငါဟာအချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ရတော့ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ PE ပြproblemsနာများသည်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ခြင်းတို့ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်ဟုထင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ ED ပြproblemsနာများကြုံရသောအခါအစဉ်အမြဲစိုက်ထူခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်။ အမြဲတမ်းစိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ငါရပြီဆိုလျှင်“ မြန်သောမီး” လှုံ့ဆော်မှုဖြင့်လည်းကောင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကြောင့် -“ ကျေးဇူးပြု၍ ကြိုးစားပါ၊
ပြီးတော့ Bam ဘာမှ! ငါတကယ်နှေးကွေး, အပူအပင်ကင်းပြီး lovemaking တကယ်ကဒီမှာငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလုပ်ပေးရန်အသုံးပြုဟောင်းလမ်းထက်လမ်းရှည်ကြာရှည်။
ကျွန်ုပ် reboot လုပ်စဉ်ကသတိပြုမိသောအရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၌လိင်နှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်ခုမှာအပြည့်ရှိခြင်းနှင့်နှေးကွေးသော (oxytocin မောင်းနှင်သောလိင်ဆက်ဆံမှု) နှင့်အခြားသည်ချိုသော၊ ပိုမိုမြန်ဆန်။ ၊ ?) ။ PE ပြproblemနာသည် dopamine မြန်သောမောင်းနှင်အားဖြင့်သာဖြစ်ပွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်ဆိုပါက PE သို့မဟုတ် ED မရှိပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အလျင်အမြန်ကြီးပြင်းလာပါက ED မရှိပါ။ PE ရှိပါသည်။ ထို့အပြင်စိုက်ထူမှုနှေးကွေးခြင်းနှင့် precent လိင်နှင့်ပိုပြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါသည်လည်း PE စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်နိုင်သည်ထင်, စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသောအားဖြင့် PMO အားဖြင့်ဖိနှိပ်သည့်ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင့်။ စိုးရိမ်ပူပန်နေစဉ်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိလမ်းကြောင်းဟောင်းအချို့ကိုလင်းစေပြီး၊ ၎င်းသည်အလွယ်တကူအော်ဂဇင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသလား။ PE သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်အော်ဂဇင်များဖြင့်မကုသနိုင်ပါ။ ၎င်းတို့သည်ရေရှည်ပြproblemနာအတွက်ကာလတိုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။
သင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည့်အခါသင်ယခင်ကကဲ့သို့ပင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသလား။ သင်သည်သင်၏လက်၏ဖိအားနှင့်အမြန်နှုန်းကိုအလွန်အမင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီးမတူကွဲပြားသောအရာများသည်သင့်အားစိုက်ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲတစ် ဦး တည်းအာရုံခံစားမှုကိုပိုမိုနှေးကွေးသော၊ ပိုမိုကာမဂုဏ်အာသာဖြေခြင်းကိုကြိုးစားပါ။
ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့သည်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးအဓမ္မရွေးချယ်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နေကြသည်: Erectile အလုပ်မဖြစ်သို့မဟုတ်အချိန်မတန်မီသုက်။ တကယ်တော့ငါနှစ် ဦး စလုံးတစ်ချိန်တည်းမှာရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်းငါ့အနိမ့်အချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာထွက်အောင်မခဲယဉ်းရလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်သူမနူးညံ့တဲ့အထိထိမိပြီးပေါက်ကွဲသွားတယ်။ ဒါကငါ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေတ္တခဏပဲ။ ငါပုံမှန်ရုန်းကန်ခဲ့ (နှင့်ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆန္ဒရှိမိတ်ဖက်ရှိသည်) နှင့်မကြာခဏအလုံအလောက်အခြေခံပေါ်မှာလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့ပြီးတာနဲ့ယခုငါအလျင်အမြန်နှင့်အလွယ်တကူရ AND သူမ၏လုံးဝစိတ်ကျေနပ်မှုရရန်အလုံအလောက်ရှည်လျားခက်ခဲနေဖို့။
[မျှ PMO နှင့်အတူ3ရက်သတ္တပတ်] မနေ့ကငါသိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်၊ ငါတကယ်တကယ့်ကိုခိုင်မြဲတဲ့စိုက်ထူကြီးတစ်ခုရခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်မတန်မီ Ejaculate (PE) လုံးဝမလုပ်ခဲ့ပါ။ ငါမှာနှစ်ပေါင်း PE ရှိခဲ့တယ်။ ငါစိုးရိမ်စိတ်အချို့ကိုချထားပေမယ့်မကြာသေးမီကငါက porn မှအလွန်အမင်း stimulation နှင့်အတူသွေးဆောင်ခဲ့သည်စဉ်းစားခဲ့ကြပြီ
ငါ၌ porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းစွဲလမ်းမှုကြောင့် PE ရှိနိုင်သဖြင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါခံစားခဲ့ရတဲ့နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ငါစိတ်လှုပ်ရှားမိတိုင်းသန္ဓေသားယိုစိမ့်မှုဖြစ်တယ်၊ ဒါကလိင်မကြည့်ခင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း၊ ငါသုတ်ရည်ယိုစိမ့်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်သုတေသနပြုလုပ်ပြီး Semen ယိုစိမ့်မှုသည် parasympathetic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံကြောကိုအားနည်းစေသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုတ်ရည်လွှတ်အဆို့ရှင်ကိုပိတ်ထားပြီးစိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်စိုက်ထူခြင်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ "ပြီးတော့ဒီ" ထိုးဖောက်မှုသို့သို့မဟုတ်အနည်းငယ်လေဖြတ်ပြီးနောက်အချိန်တိုအတွင်း၌ "ejaculat (အိုင်း) ကို ဦး တည်သွားစေနိုင်သည်။
ငါရှိခဲ့သည့်ပြhadနာအတိအကျ၊ ကျွန်ုပ်သည်သုတ်ရည်လွှတ်မှုပြီးသောနောက်တွင်စိုက်ထူခြင်းကိုပြန်ယူရန်အချိန်များစွာကြာသည်။ PMO မပါ ၀ င်လျှင် ၃ ပတ်ရှိပြီ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းပိုက်ကွန်ကို ၀ င်ရောက်နေသောအခါညစ်ညမ်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်မိမိကိုယ်ကိုချုပ်တည်းရန်များစွာလိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်မတော်တဆတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့် (လေးနက်စွာ😀) ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများသည်ဝတ်လစ်စလစ်ပုံများကိုတင်သော reddit ရှိစာမျက်နှာသို့ရောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် detox စကတည်းကစူးစိုက်စွာစိုက်ထူခဲ့သည်။ ငါသုတ်ရည်ယိုစိမ့်မှုတစ်စုံတစ်ရာမျှမကျခဲ့ပါ၊ လွန်ခဲ့သောသုံးပတ်ကငါသိသိသာသာယိုစိမ့်မှုရှိသည်ဟုပြောရတာဝမ်းသာပါတယ်။
ကြှနျတေျာ့ဇနီးငါအဖွင့်လှစ်ပထမဦးဆုံးမိတ်ဖက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့အသက်ရှူနှင့်ဖိအားကိုချွတ်ယူပွီးနောကျ, ငါစိုးရိမ်စိတ်ဘဝမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အခမဲ့အံ့သြစရာလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပိတ်ဖိအားကို ယူ. ယခုအချိန်တွင်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစုပ်ယူနှင့်အပျော်အပါးထက်ငါ့အစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။
ငါဒီအချိန်အတောအတွင်းငါ PE အပေါ်လုံးဝဖြစ်ခဲ့သည်ဟုမပြောလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကပြissueနာနည်းနည်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက်အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်ကျွန်ုပ် PE သည်တဖြည်းဖြည်းပြန်လာသည်။ ငါအကြိမ်အနည်းငယ်မှာထိန်းချုပ်မှုထဲကနေစတင်ခံစားရနှင့်ပိုပြီးအရေးကြီးတာက, နောက်တဖန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုစတင်ရန်စတင်ခဲ့ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါ 100% သေချာမသိပေမယ့်ဒီကာလညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်း၏တိုးမြှင့်နှင့်ဆက်စပ်သောယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ထို 'ဇုန်' အတွင်း၌လိင်မဆက်ဆံခြင်းမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုဖြစ်ခဲ့သည့်အချိန်ကာလတစ်ခုရှိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်အဆက်အသွယ်မတူဘဲကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်နေ့စဉ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုချက်ချင်းအားရကျေနပ်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် (သို့မဟုတ်ဒါငါထင်) ။
ကျွန်တော့်ဇနီးကိုအာရုံစိုက်ပြီးလိင်ကိစ္စမပါဘဲကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုခံစားရသည့်အချိန်များရှိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် porn ကြည့်ရှုခြင်းကြောင့်၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်အခက်တွေ့နေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လကကျွန်ုပ်သည်အသက်တာ၏အရှည်ဆုံးကာလအတွက်အော်ဂဇင်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ငါမကြာသေးမီကကစားနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ခဲယဉ်းသူဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသော်လည်းအော်ဂဇင်မတိုင်မီရပ်တန့် ကန့်ကွက်တာကမယုံနိုင်လောက်အောင်အကျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။
PE ဖြေရှင်းခြင်း - ငါရိုက်ပြီးပြီထင်တယ် သင်သည် PE သို့မဟုတ် ED ကို fapping မှရရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောသင်၏ပြaddressနာကိုဖြေရှင်းရန်အသက် ၂၉ နှစ်အထိမစောင့်ပါ။
အခြေခံအားဖြင့်တော့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့အမြန်အော်ဂဇင်တုန့်ပြန်မှုတုံ့ပြန်ချက်ကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး။ ပထမအဆင့်က fap မရှိပါ။
ကျွန်ုပ်၏အခြားကိရိယာများမှာ coitus reservatus, kegels, နှင့်ကျွန်ုပ်၏ကြွက်သားတင်းမာမှု / အသက်ရှူမှုကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြွက်သားတင်းမာမှု / အသက်ရှူခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဖြတ်သန်းသွားသောတကယ့်အရာဖြစ်သည်။ အော်ဂဇင်ကိုကြွက်သားတင်းမာမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ ငါစိတ်အေးလက်အေးစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုရှည်လျားတဖြည်းဖြည်းကြာရှည်နိုင်ခဲ့တယ် မဟုတ် ငါ့အသက်ရှင်လျက်ကိုင်ဆောင်။
Kegels တွေကနည်းနည်းလေးကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါသေချာမသိဘူး။ အော်ဂဇင်တစ်ခုကို“ kegel-ing” တွင်လုံးဝမအောင်မြင်ပါ။ kegeling ကြောင့်ကျေးဇူးတင်စကားနှစ်ခွန်းဆက်ပြီးရင်ငါဆက်လုပ်နိုင်ပေမဲ့ငါခံနိုင်ရည်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
ယနေ့ငါသွင်းခြင်းမှအစိုင်အခဲနာရီဝက်ကြာ, ငါနောက်ဆုံးတော့ဒီရှက်စရာပြproblemနာကိုရိုက်နှက်တာနဲ့တူငါခံစားရတယ်။ ၎င်းသည်နာရီဝက်ခန့်ကြာမြင့်စွာ pussy-pounding လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူမအတွင်း၌အပြည့်အဝထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကြိတ်ခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ငါအတိတ်ကာလကကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိခုန်ကျော်သွားသည် အရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့ဖူးတာကြာပြီ။ ဘာကြောင့်လဲ၊ အဘယ်သူမျှမ crossover လည်းမရှိ; ဒါကကျွန်တော့်ကိုအိပ်ယာထဲမှာကြာကြာမနေခဲ့ဘူး။
ငါရက် ၁၃၀ ပတ်လည်မှာလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ မျှော်လင့်ထားသလိုမြန်တယ်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သည့် ၃-၄ ရက်ကအကြိမ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး၊ အလွန်မြန်သောသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကိုမရှောင်ရှားရန်ထိုအရာကိုမတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနည်းခြင်းနှင့်သုက်လွှတ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်နှင့်အတူ (ဥပမာ - ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်အခြားအခြေအနေများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းမရှိခြင်း) - ငါကြိုတင် reboot လုပ်ထားသရွေ့ (နှောင့်နှေးသည့်သုက်လွှတ်မှုခံစားခဲ့ရသည့်နေရာ) သို့သွားနိုင်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အများကြီးတိုးတက်လာသောစိုက်ထူခွန်အားနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်။
တတိယအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီအထိကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခြင်းကိုခံစားခဲ့ရပြီးပိုမိုစိတ်ခံစားမှုအဆင့်တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ အခြေခံပြန်ဖွင့်တာက ဦး နှောက်ကိုဘက်မလိုက်အောင်ပြန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်၊ ပြီးတော့သင်နေချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့သင်တစ်ခုခုလုပ်ရမယ်။ လိင်ကိစ္စကတည်းကငါအလိုအလျောက်စိုက်ထုတ်မှုပိုမိုများပြားလာသည်၊ နံနက်သစ် (ရှိသေးသည်) ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်နိုးလာသည်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ပိုကြီးလာသည်ကိုသတိပြုမိသည်။
အတွက် 303 ရက်ပေါင်း by Tastybusy303 ရက်ပတ်လုံး
ဘယ်ကစရမလဲမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၀၃ ရက်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်လိုက်တယ်။ ငါတနေ့ကိုပျမ်းမျှတစ်ကြိမ် ၂ ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်ခဲ့ပေမဲ့အချို့ရက်တွေမှာတော့ ၇ ဆမှ ၁၀ ကြိမ်အထိရှိနိုင်တယ်။ ငါတောင်မှတော့ဘူးစဉ်းစားအနိုင်နိုင်။ ကျွန်မရဲ့လိင်ဘဝကနေလအနည်းငယ်အတွင်းမှာမရှိတော့တဲ့ဘဝကနေထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ်။ ငါ ED နှင့် PE ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်ပြန်လည်။ ငါမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီခွဲကန့်လန့်ကျင်ကန့်လန့်ဖြတ်ထားတယ်။
ငါအောင်မြင်မှုအချို့ရှိခဲ့ပေမယ့်နေဆဲ PE ဌာနများတွင်တိုးတက်မှုများအတွက်အခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်ခဲ့သူအခြားရှည်လျား reboot ဖြစ်၏။ ယခုတွင်ငါသည်တစ်ပါတ်အသစ်တစ်ခုခုကိုကြိုးစားနေခဲ့ကြခြင်းနှင့်ငါကကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။
ငါသုတေသနနည်းနည်း ပြု. ဂါဘမြို့သားအကြောင်းကိုအချို့သောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာတို့ကိုဖတ်ပါ။ ဂါဘမြို့သား neurotransmitters ထိုလုပ်ရပ်များထိန်းညှိရန်ကူညီပေးသည်။ ဒါဟာကျွန်မဇနီးနှင့်အတူလိင်ခဲ့သည့်အခါတစ်ဦးအလွန်လျင်မြန်စွာသညျ လာ. အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ရှင်းပြခဲ့သည်ရသောအဘယ်သူမျှမ PMO နဲ့ကျွန်မနေဆဲချိန်ခွင်လျှာထဲကဖြစ်နိုင်သည်မရှိ, အရက်, နေဖြင့်အားသွင်းစေခြင်းငှါရုံ becuase ကြောင်းငါ့ထံသို့ကြုံခဲ့ရသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ဂါဘမြို့သားနံနက်မွန်းတည့်ခြင်းနှင့်အိပ်ရာမဝင်မီ၏ 1000mg ယူပါ။
နီးပါးချက်ချင်းကျွန်မရဲ့စိုးရိမ်စိတ်အဆင့်ဆင့်အတွက်လျော့ချရေးခံစားရတယ်, ပြီးတော့ငါ့ကိုယ်ထဲမှာအာရုံ၏ sence hightened ။ နောက်ဆုံးညဥ့်ငါသည်ငါ့ဇနီး (နှင့်နောက်တဖန်ယနေ့နံနက်) နဲ့အံ့သြဖွယ်လိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါခက်ခဲသစ်သားကျောက်ခဲ့နှင့်ယခု မှစ. ငါသည်အလုပ်သူမ၏အဘို့ပြုရရန်လိုအပ်ကြောင်းထက်ကြာခဲ့သည်။
GABA နှင့် ပတ်သက်၍ ပconflictိပက္ခဖြစ်နေသောသုတေသနနှင့်ထင်မြင်ချက်များစွာရှိသည်။ အချို့က၎င်းသည်သွေးကြောဆိုင်ရာ ဦး နှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အသုံးမ ၀ င်ဟုဆိုကြသည်။ ငါယူသောအခါငါခံစားမိသောအရာကိုငါသိ၏နှင့်အလုပ်လုပ်ကြောင်းသိကြ၏။ အပြုသဘောဆောင်သောလေ့လာမှုများက ၃၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ မီလီဂရမ်သည်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုစတင်ခံစားခဲ့ရသည့်နေရာဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်တစ်နေ့လျှင် ၃၀၀၀ ယူရမည်။ ၁၀၀၀ မီလီဂရမ် GABA ကိုသောက်သုံးခြင်းကသင့်အားသင်၏မျက်နှာ၊ လက်နှင့်လက်များကိုသင်ယူပြီးမိနစ် ၂၀ အကြာ၌သင့်အားခေတ္တခဏတုန်ခါခြင်းသို့မဟုတ်အပူခံစားရစေနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ဒါဟာအစမှာနည်းနည်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပေမယ့်မိနစ်အနည်းငယ်ပဲကြာပါတယ်။ ငါသည်လည်းအခြားဖြည့်စွက်တစည်းယူပေမယ့် GABA ငါ့အဘို့အနည်းဆုံး "ငါတို့" ပြproblemနာနှင့်အတူသိသိသာသာခြားနားချက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။
NoFap မည်သူမဆိုတူညီသောကိုသတိပွုမိ, ငါ့အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ပြဿနာ fixed? 10 စက္ကန့်ကနေ 3-5 မိနစ်။
အဘယ်သူမျှမ-FAP ရက်ပေါင်း pre ကျွန်မရဲ့ရည်းစားနှင့်အတူလိင်ကာလအတွင်းသာနောက်ဆုံး 10 စက္ကန့်နိုင်ပါကအကြှနျုပျကိုစူပါဝမ်းနည်းစေကြ၏။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ PE'er အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပြီးခဲ့သည့်ညတွင်လိင်ဆက်ဆံရန်အတော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ငါ ၃၃ ရက်ပတ်လုံးနေပြီးကောင်းတာလုပ်ခဲ့တယ်။
ငါလိင်, သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်သုတ်ရည် - retention ကိုယခုခဏလောက်စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်မှာစိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်ခဏတာပြီးနောက်၊ စိတ်ရင်းမှန်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော့်မှာစိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်တဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးအချို့ရှိခဲ့တယ်။ ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲနိုင်မှာကိုငါအမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့နေတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ပြီးခဲ့သည့်ညတွင်နောက်ဆုံး၌ငါနှင့်လက်တွဲဖော်နှင့်အသက်ရှူခြင်းဖြင့်သာမက၊ ဒါဟာတကယ်ကိုထူးခြားပါတယ်။ ငါ blueballs နည်းနည်းပြီးနောက်, စွမ်းအင်ယိုစီးမှုမခံစားရဘူး dit, ဒါပေမယ့်အဲဒါပါပဲ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်နာရီအိပ်ခဲ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်တကယ်ကောင်းသောခံစားမှုနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဒါ့အပြင် - PE အကြောင်းကို။ ငါဟာခြောက်သွေ့တဲ့အော်ဂဇင်နည်းကိုကျွမ်းကျင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​တစ်ခါတစ်ရံတော့ငါလည်းရပ်ရမယ်လို့ငါ့သမီးကိုပြောလိုက်သည်။ ၁၀ မိနစ်အကြာတွင် PE သည်လုံးဝစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည် ၃၀ မိနစ်လွယ်ကူစွာသွားနိုင်သည်။ အော်ဂဇင်စတင်သောအခါတွင်၎င်းသည်အစစ်အမှန်ကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကွန်ဒုံးခြောက်သွားခြင်းအတွက် မှလွဲ၍ ကျန်သည်။
ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ဂုဏ်ယူတယ်၊ ငါ့ဇာတ်လမ်းကိုသုံးပြီးယောက်ျားပီသခြင်းနှင့်သန္ဓေတည်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ကြောင့်အခြားသူများကို PE နှင့်ပြင်းထန်သောစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်မျှော်လင့်ချက်အသစ်တစ်ခုပေးချင်တယ် ကျေးဇူးပြု၍ သဒ္ဒါအမှားများကိုခွင့်လွှတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အဓိကဘာသာစကားမှာအိုက်စလန်ဘာသာစကားဖြစ်သောကြောင့် NoFap ၏အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်-အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်း။ [အော်ဂဇင်မပါဘဲလိင်အပေါ်ပိုမို: ရည်းစားများ 'Ultimate Sex Hack: Karezza]
စိတ်ဝင်စားစရာရှေးဟောင်းတရုတ် Daoists လည်းအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ရောဂါလက္ခဏာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသော "ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းခြင်းမရှိဘဲအသုံးစရိတ်။ "
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိုက် depleting ပေမယ့်ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, သောသုတ်ရည်လွှတ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ချက်ချင်း Post-coital တာကတော့စိတ်ဓာတ်ပြီးနောက်တစ်ဦးလျှင်မြန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်တက်နှင့်ခေါ်ဆောင်သွားအကျိုးစီးပွားပြင်းထန်မှုလည်းမရှိ။ inertia ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေ, ရွေ့လျားမှုအတွက်ဆက်လက်ရွေ့လျားအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောထားကို, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, အကောင်းဆုံး (ရေအားဖြင့်ဖြုတ်သိမ်းမီးရိုးရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပစာအတွင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်yin Hsu huo Wang) နှင့် [ဖြေရှင်းချက်] က Taoist အတွေးစကားပုံကတော့ "အခါ Ching တဦးတည်း, ကိလေသာလွန်ကျူးအတွေးများကိုအခမဲ့ဖြစ်ပါသည် [ဆိုလိုသည်မှာအခါတဦးတည်းပျက်ဆီးမဟုတ်ပါ] အပြည့်အဝဖြစ်၏။ "
ထိုသို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည် အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ် (tsao-Hsieh), spermatorreah (Hua-Ching, ဒါမှမဟုတ် Post-orgasm နာမကျန်းရောဂါ) နှင့် nocturnal ထုတ်လွှတ်မှု (meng) မကြာခဏဘာကနေရရှိလာတဲ့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်မြင့်မားသောအဆင့်နှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်ချို့တဲ့နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် စုနု၏ဂန္ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, "ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းခြင်းမရှိဘဲအသုံးစရိတ်။ " ထို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုမသုတ်ရည်သုံးစွဲပေမယ့်ကယ်ဖို့စွမ်းရည်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရဖို့ရောက်လာတယ်။ ကောက်နှုတ်ချက်သည် Douglas Wile ၏စာအုပ်: Art of the Bedchamber, စ။ ၆-၇ ဖြစ်သည်
ဘို့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြန်လည်နာလန်ထူနောက်ထပ်
အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (1993) နဲ့အမျိုးသားများတွင် penile sensitivity ကို)